အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် (16 Substitutes for “Because” or “Because Of”) - Myanmar Network
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် (16 Substitutes for “Because” or “Because Of”)
Posted by zar ni (My Way!) on September 16, 2013 at 17:06 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အင်္ဂလိပ်ဘာသာတွင် အကြောင်းအကျိုးရှင်းပြရန် ဆင်ခြေပေးရန် စကားလုံးများစွာရှိပါသည်။ ၄င်းတို့အထဲတွင်အသုံးအများဆုံးမှာ because နှင့် because of (အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်) ပင်ဖြစ်သည်။ သင့်အနေဖြင့် သာမန်လေ့လာသူမဟုတ်ဘဲ အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို ထိထိရောက်ရောက် ရေးသားလိုသည့်အခါ ၎င်းစကားလုံးများအား အစားထိုးသုံးစွဲနိုင်ရန် ဖြစ်စေ၊ သူတစ်ပါးရေးထားသည့် စာကိုနားလည်သဘောက်ပေါက်စေရန်ဖြစ်စေ ၄င်းတို့ကို သိထားရန်လိုအပ်ပေသည်။
Because သည် ၀ါကျနှစ်ခုကိုဆက်သည့် conjunction ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် because ၏နောက်က clause လိုက်သည်။ because of သည် ၀ိဘတ်ပါစကားစု phrasal preposition ဖြစ်သည်။ သူ၏နောက်က noun သို့မဟုတ် pronoun လိုက်သည်။
The picnic was canceled because it was raining.
The picnic was canceled because of the rain.
because it was raining. ( Subject လည်းရှိသည်။ verb လည်းရှိသည်။)
because of the rain. (“the rain” သည် noun ဖြစ်သည်။
because နှင့် because of တို့၏ တည်ဆောက်ပုံကိုသိလျှင် အောက်ပါ အစားထိုး စကားလုံးများသုံးစွဲနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
1. As: ဖြစ်သည့်အားလျှော်စွာ၊ အနေနှင့် ။ သောကြောင့်။ သည့်အတွက်။
As သည် because ၏အနီးဆုံး အဓိပ္ပါယ်တူစကားလုံးဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် because ထက်နည်းနည်းပျော့သည် ဟုဆိုကြသည်။
“He opted not to go see the movie, as it had gotten poor reviews”
ရုပ်ရှင်အကဲဖြတ်ချက်တွင်အဆင့်နိမ့်နေသည့်အတွက် သူထိုရုပ်ရှင်အား သွားမကြည့်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
2. Asaresult of: ရလာဒ်အားဖြင့်၊ အကျိုးဆက်အားဖြင့်။
၄င်းသည် “because of,” အစားသုံးသည်။ because မဟုတ်။
“Asaresult of his intervention, the case was reopened and they were ultimately exonerated.”
သူ၏ကြားဝင်စေ့စပ်မှုကြောင့် အမှုအားပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီး သူတို့အား တရားသေလွှတ်လိုက်သည်။
3. As long as
သရွေ့၊ တစ်ခုခုဖြစ်နေ ရှိနေသရွေ့ အခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်နေ ရှိနေမည်ဟူသည့် အဓိပ္ပါယ်တွင် informal equivalent of because အနေဖြင့်သုံးသည်။
“As long as you live, I'll be waiting for you?”
4. Being as (or being as how or being that): ဖြစ်သောကြောင့်။
“as long as.” နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
5. Considering that: စဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်၊ ဖြစ်သောအားဖြင့်။
“as long as” နှင့် “being as” တို့၏မူကွဲများအဖြစ်သုံးသည်။ အဓိပ္ပါယ်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
6. Due to: အကြောင်းကြောင့်၊ ဖြစ်သောကြောင့်။
သူ၏နောက်တွင် Noun phrase လိုက်သည်။ “asaresult of,” “due to” isapreposition, rather thanaconjunction like because, and is used in place not of because alone but instead of “because of.” It applies specifically to an explanation of why something occurred or will or will not occur, as in
“Due to the large number of applications, we cannot respond individually to each applicant.”
လျှောက်လွှာပမာဏများပြားသောကြောင့် လျှောက်လွှာရှင်တစ်ဦးချင်းစီအား အကြောင်းမပြန်နိုင်ပါ။
7. For: အတွက်ကြောင့်။ အလို့ငှာ။ ဖို့။
သူသည်လည်း because ၏အစားထိုးအသုံးဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ကဗျာလင်္ကာဆန်သော အသုံးတွင်သာသုံးလေ့ရှိသည်။
သုံးဆောင်စားသောက်ကြပါလော့။ အကြောင်းကား ကျွန်ုပ်တို့ မနက်ဖြန် သေရမည်တည်း။
8. In as much as: အကြောင်းကိုထောက်ခြင်းအားဖြင့်။ အကြောင်းမူကား။
ဤစကားလုံးသည် အလွန် ခံ့ခံ့ညားညားသုံးသည့် စကားလုံးဖြစ်သည်။ This phrase isavery formal equivalent of because, as in
“In as much as his account has been discredited, I wouldn’t believe anything else he says.”
သူ့မကောင်းသတင်းများထောက်ချင့်ခြင်းအားဖြင့် သူပြောသမျှအရာမှန်သမျှ ကျွန်ုပ်မယုံကြည်နိုင်ပေ။
9. In view of the fact that:
In view of the fact that သည် “inasmuch as.” နှင့်ဆိုလိုရင်းထပ်တူပင်ဖြစ်သည်။
10. Now that: ဖြစ်ပြီဆိုတော့၊ --- ပြီဆိုတော့။
အကြောင်းနှင့်အကျိုး ဆက်စပ်မှုကိုပြသည်။ သာမာန်အသုံးဖြစ်သည်။
“Now that you’re here, we can proceed.”
11. Out of: ဖြင့်။
စိတ်ခံစားချက်ဖြင့်ပြုသည်၊ ပြောသည် ဟူသည့်အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။
“She asked out of compassion.”
သနားသဖြင့် (စာနာစိတ်ဖြင့်) သူမေးလိုက်သည်။
“Out of spite, I refrained from passing the message along.”
မလိုစိတ်ဖြင့်၊ မုန်းထားစိတ်ဖြင့် ကျွန်တော် သတင်းစကားအား လက်ဆင့်ကမ်းခြင်းမပြုခဲ့ပေ။
12. Owing to: အကြောင်းကြောင့်၊ ဖြစ်သောကြောင့်။
“due to” နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ “because of.” ထက်ပို၍ informal ဖြစ်သည်။
13. Seeing that: စဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်၊ ဖြစ်သောအားဖြင့်။
“considering that.” နှင့်အဓိပ္ပါယ်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
14. Since: သောကြောင့်။
since ၏အဓိကအသုံးမှာ ကုန်ဆုံးသွားသောအချိန်ကိုရည်ညွှန်းသည့် “ကတည်းက” ဖြစ်သည့်အတွက် because အစားသုံးစွဲသည့်အခါ informal ပိုဖြစ်ပါသည်။ စာဖတ်သူများအတွက် ရှုပ်ထွေးကောင်း ရှုပ်ထွေးနိုင်ပါသည်။
“Since(because) it had rained, we didn’t need to water the garden.”
မိုးရွာထားသောကြောင့် ပန်းခြံကို ရေလောင်းရန်မလိုခဲ့ချေ။
15. Thanks to: --- ကျေးဇူးကြောင့်၊ ရလာဒ်အားဖြင့်၊ အကျိုးဆက်အားဖြင့်။
“because of,” အစားသုံးနိုင်သည်။ positive oranegative outcome အကောင်းရလာဒ်ဖြစ်စေ၊ အဆိုးရလာဒ်ဖြစ်စေကိုဖော်ပြနိုင်သည်။
“Thanks to your meddling, we’re receiving much unwanted attention”
ခင်ဗျားဝင်ရှုပ်တဲ့ကျေးဇူးကြောင့် ကျွန်တော်တို့မှာ မလိုချင်ဘဲ လူအများအာရုံစိုက်ခံနေရပြီ။
16. Through: အကြောင်းကြောင့်၊ အားဖြင့်၊ မှတစ်ဆင့်။
သည်လည်း preposition ဖြစ်သည်။ “because of,” အစားသုံးနိုင်သည်။
“Through the efforts of these charities, the city’s homeless services have been reinstated.”
လူမှုဒါနအသင်းအဖွဲ့များ၏အားထုတ်မှုကြောင့် မြို့တော်၏ အိုးအိမ်မဲ့များအတွက် အကူအညီများ ပြန်လည်အသက်ဝင်လှုပ်ရှားလာခဲ့သည်။
source: Mark Nichol "16 Substitutes for “Because” or “Because Of"
အင်ျဂလိပျဘာသာတှငျ အကွောငျးအကြိုးရှငျးပွရနျ ဆငျခွပေေးရနျ စကားလုံးမြားစှာရှိပါသညျ။ ၄ငျးတို့အထဲတှငျအသုံးအမြားဆုံးမှာ because နှငျ့ because of (အဘယျကွောငျ့ဆိုသျော) ပငျဖွဈသညျ။ သငျ့အနဖွေငျ့ သာမနျလလေ့ာသူမဟုတျဘဲ အင်ျဂလိပျဘာသာကို ထိထိရောကျရောကျ ရေးသားလိုသညျ့အခါ ၎င်းငျးစကားလုံးမြားအား အစားထိုးသုံးစှဲနိုငျရနျ ဖွဈစေ၊ သူတဈပါးရေးထားသညျ့ စာကိုနားလညျသဘောကျပေါကျစရေနျဖွဈစေ ၄ငျးတို့ကို သိထားရနျလိုအပျပသေညျ။
Because သညျ ဝါကနြှဈခုကိုဆကျသညျ့ conjunction ဖွဈသညျ။ ထို့ကွောငျ့ because ၏နောကျက clause လိုကျသညျ။ because of သညျ ၀ိဘတျပါစကားစု phrasal preposition ဖွဈသညျ။ သူ၏နောကျက noun သို့မဟုတျ pronoun လိုကျသညျ။
because it was raining. ( Subject လညျးရှိသညျ။ verb လညျးရှိသညျ။)
because of the rain. (“the rain” သညျ noun ဖွဈသညျ။
because နှငျ့ because of တို့၏ တညျဆောကျပုံကိုသိလြှငျ အောကျပါ အစားထိုး စကားလုံးမြားသုံးစှဲနိုငျပွီဖွဈသညျ။
1. As: ဖွဈသညျ့အားလြှျောစှာ၊ အနနှေငျ့ ။ သောကွောငျ့။ သညျ့အတှကျ။
As သညျ because ၏အနီးဆုံး အဓိပ်ပါယျတူစကားလုံးဖွဈသညျ။ သို့ရာတှငျ because ထကျနညျးနညျးပြော့သညျ ဟုဆိုကွသညျ။
ရုပျရှငျအကဲဖွတျခကျြတှငျအဆငျ့နိမျ့နသေညျ့အတှကျ သူထိုရုပျရှငျအား သှားမကွညျ့ရနျရှေးခယျြခဲ့သညျ။
2. Asaresult of: ရလာဒျအားဖွငျ့၊ အကြိုးဆကျအားဖွငျ့။
၄ငျးသညျ “because of,” အစားသုံးသညျ။ because မဟုတျ။
သူ၏ကွားဝငျစစေ့ပျမှုကွောငျ့ အမှုအားပွနျလညျဖှငျ့လှဈပွီး သူတို့အား တရားသလှေတျလိုကျသညျ။
သရှေ့၊ တဈခုခုဖွဈနေ ရှိနသေရှေ့ အခွားတဈခုလညျးဖွဈနေ ရှိနမေညျဟူသညျ့ အဓိပ်ပါယျတှငျ informal equivalent of because အနဖွေငျ့သုံးသညျ။
4. Being as (or being as how or being that): ဖွဈသောကွောငျ့။
“as long as.” နှငျ့အတူတူပငျဖွဈသညျ။
5. Considering that: စဉျးစားခွငျးအားဖွငျ့၊ ဖွဈသောအားဖွငျ့။
“as long as” နှငျ့ “being as” တို့၏မူကှဲမြားအဖွဈသုံးသညျ။ အဓိပ်ပါယျအတူတူပငျဖွဈသညျ။
6. Due to: အကွောငျးကွောငျ့၊ ဖွဈသောကွောငျ့။
သူ၏နောကျတှငျ Noun phrase လိုကျသညျ။ “asaresult of,” “due to” isapreposition, rather thanaconjunction like because, and is used in place not of because alone but instead of “because of.” It applies specifically to an explanation of why something occurred or will or will not occur, as in
လြှောကျလှာပမာဏမြားပွားသောကွောငျ့ လြှောကျလှာရှငျတဈဦးခငျြးစီအား အကွောငျးမပွနျနိုငျပါ။
7. For: အတှကျကွောငျ့။ အလို့ငှာ။ ဖို့။
သူသညျလညျး because ၏အစားထိုးအသုံးဖွဈသညျ။ သို့ရာတှငျ ကဗြာလင်ျကာဆနျသော အသုံးတှငျသာသုံးလရှေိ့သညျ။
သုံးဆောငျစားသောကျကွပါလော့။ အကွောငျးကား ကြှနျုပျတို့ မနကျဖွနျ သရေမညျတညျး။
8. In as much as: အကွောငျးကိုထောကျခွငျးအားဖွငျ့။ အကွောငျးမူကား။
ဤစကားလုံးသညျ အလှနျ ခံ့ခံ့ညားညားသုံးသညျ့ စကားလုံးဖွဈသညျ။ This phrase isavery formal equivalent of because, as in
သူ့မကောငျးသတငျးမြားထောကျခငျြ့ခွငျးအားဖွငျ့ သူပွောသမြှအရာမှနျသမြှ ကြှနျုပျမယုံကွညျနိုငျပေ။
In view of the fact that သညျ “inasmuch as.” နှငျ့ဆိုလိုရငျးထပျတူပငျဖွဈသညျ။
10. Now that: ဖွဈပွီဆိုတော့၊ --- ပွီဆိုတော့။
အကွောငျးနှငျ့အကြိုး ဆကျစပျမှုကိုပွသညျ။ သာမာနျအသုံးဖွဈသညျ။
11. Out of: ဖွငျ့။
စိတျခံစားခကျြဖွငျ့ပွုသညျ၊ ပွောသညျ ဟူသညျ့အဓိပ်ပါယျရှိသညျ။
သနားသဖွငျ့ (စာနာစိတျဖွငျ့) သူမေးလိုကျသညျ။
မလိုစိတျဖွငျ့၊ မုနျးထားစိတျဖွငျ့ ကြှနျတျော သတငျးစကားအား လကျဆငျ့ကမျးခွငျးမပွုခဲ့ပေ။
12. Owing to: အကွောငျးကွောငျ့၊ ဖွဈသောကွောငျ့။
“due to” နှငျ့အတူတူပငျဖွဈသညျ။ “because of.” ထကျပို၍ informal ဖွဈသညျ။
13. Seeing that: စဉျးစားခွငျးအားဖွငျ့၊ ဖွဈသောအားဖွငျ့။
“considering that.” နှငျ့အဓိပ်ပါယျအတူတူပငျဖွဈသညျ။
14. Since: သောကွောငျ့။
since ၏အဓိကအသုံးမှာ ကုနျဆုံးသှားသောအခြိနျကိုရညျညှနျးသညျ့ “ကတညျးက” ဖွဈသညျ့အတှကျ because အစားသုံးစှဲသညျ့အခါ informal ပိုဖွဈပါသညျ။ စာဖတျသူမြားအတှကျ ရှုပျထှေးကောငျး ရှုပျထှေးနိုငျပါသညျ။
မိုးရှာထားသောကွောငျ့ ပနျးခွံကို ရလေောငျးရနျမလိုခဲ့ခြေ။
15. Thanks to: --- ကြေးဇူးကွောငျ့၊ ရလာဒျအားဖွငျ့၊ အကြိုးဆကျအားဖွငျ့။
“because of,” အစားသုံးနိုငျသညျ။ positive oranegative outcome အကောငျးရလာဒျဖွဈစေ၊ အဆိုးရလာဒျဖွဈစကေိုဖျောပွနိုငျသညျ။
ခငျဗြားဝငျရှုပျတဲ့ကြေးဇူးကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့မှာ မလိုခငျြဘဲ လူအမြားအာရုံစိုကျခံနရေပွီ။
16. Through: အကွောငျးကွောငျ့၊ အားဖွငျ့၊ မှတဈဆငျ့။
သညျလညျး preposition ဖွဈသညျ။ “because of,” အစားသုံးနိုငျသညျ။
လူမှုဒါနအသငျးအဖှဲ့မြား၏အားထုတျမှုကွောငျ့ မွို့တျော၏ အိုးအိမျမဲ့မြားအတှကျ အကူအညီမြား ပွနျလညျအသကျဝငျလှုပျရှားလာခဲ့သညျ။
Permalink Reply by tunwai on September 17, 2013 at 20:47
Permalink Reply by venus on September 18, 2013 at 9:31
Thanks to your learning.
Permalink Reply by Cho Cho Khine on September 19, 2013 at 12:39
Permalink Reply by winminthient on September 20, 2013 at 14:57
I used to read your post. Thank you so much Sayar Zarni.
Permalink Reply by Aye Hnin Moe on September 23, 2013 at 11:29
Thank you so much Sayar
Permalink Reply by LwanAKary on September 23, 2013 at 13:07
Permalink Reply by theinthansukyaw on December 8, 2013 at 12:33
Permalink Reply by Khaing Yee Yee Tun on December 8, 2013 at 21:24
Permalink Reply by thinkhaingsoe on October 21, 2014 at 5:19
Thankalot of my teacher.
Permalink Reply by Chitkhon Kha on June 21, 2015 at 1:45
Permalink Reply by မင်း မင်း on July 30, 2015 at 8:06
Permalink Reply by Thiha Htun on July 30, 2015 at 15:31